Cha Cha Change Persons Ma Booth Cashiers Job Description / Ọrụ Na Ibu Ọrụ Template - JobDescriptionSample.org
Home / Uncategorized / Cha Cha Change Persons Ma Booth Cashiers Job Description / Ọrụ Na Ibu Ọrụ Template
Jacob June 28, 2016 Uncategorized 7 Comments 1,684 Echiche
Exchange ego, tokens, na ibe maka customersA dollars. Pụrụ inye nweta mbinye aka nke asịwo na ụgwọ na ụgwọ. Nwere ike ịgụ na ụtụ isi ego na-ose, ma ọ bụ na-arụ ọrụ a cubicle na oghere igwe ebe na-enye ego akụ ịgbanwe folks site na mmalite nke aga.
Adabere dollars na ụtụ isi ego úkwù.
Ịnọgide na-enwe kwesịrị ekwesị ndekọ nke zuo reconciliations, ikike iche, na gbasara ego obodo mgbanwe.
gbanwee n'aka, na cha cha ibe, na ike ịgbanwe maka ndị na-azụ.
Ntị mmeri maka jackpot njikere hey na nsogbu ụgwọ.
Nọgidenụ na-ulo nkita nchedo dị na ụkpụrụ.
Izukotakwa kwa ụbọchị nke nchikota nke amụọ kwụsie ike mbipụta.
Workin ebe oghere-igwe nwere ike hụrụ na-elele a region e kenyere na cha cha n'ala.
Nweta clientsA edebe ụbọchị izu na receipts mgbe payout gafee ngụkọta ego na a oghere-igwe.
Nye Ịgba Cha Cha ibe, tiketi ka patrons ọzọ ọrụ maka resell, ma ọ bụ ka patrons, ma ọ bụ tokens.
Kpebisie ike na sonyere na-enweta ma ọ bụ ikpîkpu site site ruru eru nke ibe.
Chọọ a ego na-akụ site na mmalite nke ọ bụla nyefe gbanwee ihe ndị mmadụ.
Were n'aka ngwa na nyochaa n'aka zoro ezitekwara enyocha-cashing nabata ma ọ bụ ọbụna ka ụlọ kaadị akaụntụ.
Igbu ndị dị otú ahụ dị ka ihe atụ ekpocha ego jams, obere rụzie slotmachines.
Ọrụ nchụso mkpa
Agụ ịghọta-Ịmara kwadebere ahịrịokwu na edoghi na ọrụ na-akwụkwọ.
Active na-ege ntị-enye zuru ezu maara ihe na ndị ọzọ ndị na-ekwu, enweta oge aka ịghọta ihe a na-eme, arịọ okwu ndị dị ka nke ziri ezi, na mgbe mesmerizing na oge na-adịghị anakwere.
Publishing-On akwụkwọ dị ka ihe kwesịrị ekwesị maka chọrọ nke ìgwè mmadụ na-ekwu okwu ọma.
Na-ekwu okwu-Ịgwa ndị na-ezitere ọmụma rụọ ọrụ nke ọma.
Mathematics-Iji maths idozi nsogbu.
Science-Iji ngwọta na-achịkwa iwu na-edozi nsogbu.
Na-eche na a na-oké egwu-Ime ihe mere na ihe ndị mere na-aghọta uru na ọghọm nke nsonaazụ, ọzọ uzo ozo ma ọ bụ na-eru nso ka nsogbu.
Active Learning-ịghọta ọhụrụ ọmụma si uru gbasara onye ọ bụla ugbu a nakwa n'ọdịnihu edozi nsogbu na mkpebi.
Ịmụta eru Nso-ahọrọ na-eji trainingORinstructional eru nso na Filiks kwesịrị ekwesị maka ọnọdụ mgbe amụ ma ọ bụ izi ihe nke bụ ihe ọhụrụ.
Ịlele-Nlekota / chọpụtara irè nke onwe, folks na ndị ọzọ, ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-eme ka nkwalite ma ọ bụ tụlee iji dozie ọnọdụ.
Social Perceptiveness-Ịmara nke ndị ọzọ’ Jeremaya mere ihe mere ha mere n'ihi na ha na-eme na ịghọta.
Control-Ịgbazi omume na okwu nke othersI nzọụkwụ.
Eru n'obi-doro ndị ọzọ ka mma na omume ma ọ bụ ha amamihe.
Mmezi-ewere ndị ọzọ ọnụ na-na-achọ ịghọta ọdịiche.
Ịkụziri-Ọzụzụ ndị ọzọ HOWTO ka a aga.
Service Usoro-Ghaghị achọ azum inyere ndị mmadụ.
Advanced-edozi nsogbu-ikpebi elu nsogbu na akafiakde info na yiri inwale ma mee ka uzo ozo na itinye ihe ngwọta.
Operations Evaluation-nyochasịkwara kwesịrị na ngwọta prerequisites ike a style.
Technology Design-Technology na-arụ ọrụ n'otu n'otu na guzosie ike ngwaọrụ ma ọ bụ na-amụba ọchịchọ.
Tools Nhọrọ-ikpebi ngwá ọrụ na akụrụngwa nke ụdị mkpa ime a ọrụ.
Nkeji nkeji-wụnye akụrụngwa, igwe, wiring, ma ọ bụ omume n'ozuzu izute atụmatụ.
Programming-edegara kọmputa nchịkọta maka dị iche iche na nzube.
Operation Monitoring-Ilele Isi, nnwale, ma ọ bụ dị iche iche ihe ịrịba ama iji hụ ihe akụrụngwa na-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi.
Arụ ọrụ na Jikwaa-Igbochi ọrụ nke ngwaahịa ma ọ bụ na usoro.
Mmezi-Ịrụ bụkwanụ na bụ na-eme na ngwaahịa na-ekpebi mgbe na ụdị ihe bụkwanụ dị mkpa.
Nchọpụta nsogbu-Ikpebi ihe mere ọrụ mejọrọ na ị na-ahọrọ otú n'ihu banyere ihe ọ bụla nke ya.
Iweghachi-Fixing ngwaọrụ ma ọ bụ ụzọ tinye n'ọrụ akụrụngwa na-achọrọ.
Quality Control Nnyocha-Ịrụ ule na inspections nke ihe, ọrụ, ma ọ bụ usoro iji inwale quality ma ọ bụ arụmọrụ.
View na Decisionmaking-Ịtụle comparative ahịa na uru nke omume na ndị yiri ka họrọ kacha adabara onye.
Analysis-Ịmata otú oganihu ọnọdụ, arụmọrụ, na ọnọdụ a ga-emetụta ga esi na ụdị ihe Usoro kwesịrị ịrụ.
Ụzọ Analysis-Ịmata ụzọ ma ọ bụ n'ókè nke arụmọrụ tinyere kwesịrị ekwesị ma ọ bụ na-eme ihe dị mkpa iji mee ka arụmọrụ, ikwu na ihe mgbaru ọsọ nke usoro.
Timemanagement-Ijikwa onye ahụ oge na ndị ọzọ’ oge.
Operations nke Ego-Ikpebi otú dollars ga-nyekwara iji nweta ọrụ dechara, na aza ajụjụ maka ndị a na-akwụ ụgwọ.
Operations nke Substance Resources-Inweta na chọpụtara kwupụta ezigbo ojiji nke ọrụ ngwá, na mmiri onunu mkpa ime akpan akpan ọrụ.
Operations nke Ọrụ Resources-ume, emepe emepe, na aiming folks ka ha na-arụ ọrụ, egosi kpọmkwem n'elu ndị mmadụ maka ọrụ unu.
Education Iwu ahụmahụ Iwu
Senior High School Degree (ma ọ bụ Gedalaya ma ọ bụ Senior School narị afọ ise tupu Certificate)
Naa-karịa a High School ubre
Ọtụtụ School Programs
Mkpebi Siri Ike – 87.05%
mgbalị – 87.08%
enyemaka – 89.96%
Iche maka Ndị ọzọ – 88.32%
Social Ndọtị – 86.73%
Njikpa onwe – 92.31%
Pressure fọrọ – 89.33%
ịtụkwasị – 93.58%
Ịmara Nkọwa – 91.95%
pụrụ ịdabere – 88.67%
ọganihu – 86.97%
gbasara nyocha Echiche – 87.80%
Istnọgidesi ike na Nchụ nta Job Ga-aba Uru
February 7, 2019 na 8:11 elekere
Mee 2, 2019 na 10:05 elekere
Pingback: Does Your Resume Scream| | Obodo
Pingback: Istnọgidesi ike na Nchụ nta Job Ga-aba Uru – Nkọwapụta ndị ọrụ nọọsụ na ndị ọrụ metụtara ya na-arụ ọrụ aka
Pingback: Nkọwapụta ndị ọrụ nọọsụ na ndị ọrụ metụtara ya na-arụ ọrụ aka - TG ...(Dandanah, Hillsburg, Nasj, BoomBoom)